Ezona laptops zitshiphu kakhulu-Sikunceda ugcine
Ngaphantsi kwe- € 500
Ngaphantsi kwe- € 1000
Imidlalo engaphantsi kwe-€ 1000
Ixabiso elingcono lemali
Yiyiphi ilaptop enokuthenga?
ILaptop yeRyzen 5
ILaptop yeRyzen 7
Akukho nkqubo yokusebenza
I-notebook encinci kakhulu
Iilaptops ezilungileyo kakhulu
Sithelekisa kwaye sihlalutye laptops cheap ngokweempawu ezithile ukuze ukwazi ukufumana eyona ilungileyo kumgangatho kunye nexabiso.
Iintengiso zanamhlanje kwiiLaptops ezitshiphu
Ukuthenga enye yeelaptops ezinexabiso eliphantsi kufana nokuthenga imoto. Kuya kufuneka wenze uphando lwakho kwaye amaxesha alithoba kwishumi kufuneka "uyinike i-spin" ngaphambi kokuba uzibophelele ukuyibuyisela ekhaya, njengoko oko kulungileyo kummelwane wakho kusenokungabi kulungile kuwe. Ngaphambi kokuba ucinge ukuba yeyiphi imodeli onokuyifuna, kuya kufuneka uqwalasele iindleko zayo kunye nohlahlo lwabiwo-mali onayo..
Ukukhululeka kwakho, senze eyona nxalenye inzima yomsebenzi, sihlanganisa kweli nqaku iilaptops zexabiso eliphantsi. Sifake imodeli yazo zonke iimfuno, ke kungakhathaliseki ukuba uza kuyisebenzisela ntoni na, ngokuqinisekileyo uya kufumana eyona ifanelekileyo kuwe.
Ukuba awukayazi ukuba yeyiphi ilaptop oyifunayo, ngezantsi unothotho lwezikhokelo zokuthenga eziya kukunceda ukhethe ngokusekelwe kwiimpawu ozifunayo:
Ixabiso eliphezulu lomgangatho welaptop
Ilaptop yokudlala ngemali engaphantsi kwe-euro eyi-1000
Iilaptops ezingaphantsi kwee-euro ezingama-1000
Iilaptops ezingaphantsi kwee-euro ezingama-500
Ilaptop yeLinux. Yeyiphi onokuyithenga?
2-in-1 iilaptops eziguquguqukayo
Iilaptops ngaphandle kwenkqubo yokusebenza
Iibrendi zelaptop ezilungileyo kakhulu
13 intshi laptop
14 intshi laptop
15 intshi laptop
17 intshi laptop
Iilaptops ngokosetyenziso ofuna ukukunika lona
Ilaptop yoyilo lwegraphic
Iyaphatheka kuhlelo lwevidiyo
Ephathekayo ukwenzela inkqubo
Ephathekayo ukuya emsebenzini
Ngohlahlo lwabiwo-mali lwe-500 kunye ne-€ 1.000, olu thelekiso luya kukunceda ukhethe ngokweemfuno zakho.
Ukuba awunayo iklasi ukuba uthenge eyiphi, sikwenze wanye Isikhokelo esipheleleyo ukuze ukhethe yeyiphi ilaptop oyithengayo ngokunqakraza kwikhonkco.
Ezona laptops zingabizi kakhulu zika-2021
Ewe, ngaphandle kokuqhubeka, masiqale ngeelaptops ezingabizi kakhulu zika-2021. Ukwenza uluhlu, asizange sithathele ingqalelo kuphela ixabiso, kodwa kunye noyilo, iinkcukacha zobugcisa kunye neminye imiba emininzi.
Jonga unikezelo olukhulu esilufumene kancinci apha ngezantsi kuba le modeli ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuyiqwalasela, ngenxa yesi sizathu sibeke kuqala. Yincwadana ecekethekileyo nethe cwaka. Mhlawumbi isetyenziswa kakuhle njengelaptop yesibini okanye njengelaptop yomsebenzi yabafundi kunye neengcali. Ufumana oko uhlawulayo, ngoko kungcono ungalindeli isantya okanye ukusetyenziswa. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba yeyona laptop inexabiso eliphantsi kolu luhlu, ipakisha izinto ezintle ezintle.
CHUWI IHeroBook 14.1 '...
Eyona nto ichukumisayo yi-64 GB yayo, olu luphawu olukhulu olusweleyo uninzi lweelaptops esizibandakanyileyo kolu luhlu. Kuya kufuneka ucinge nge-CHUWI HeroBook njengempendulo kaMicrosoft kwiChromebook. Ukuba awuhambisani nenkqubo yokusebenza yeChrome kwaye uqhele ukusebenzisa Windows 10, ke le yenye yeelaptops ezingabizi kakhulu ezivela kuMicrosoft.
Le khompyuter iya kufaneleka kakhulu ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunokukhanya: jonga i-Intanethi, sebenzisa i-Microsoft Office (efana ne-Word kunye ne-Excel), lawula kwaye uhlaziye iinethiwekhi zoluntu, sebenzisa iinkonzo zevidiyo zokusasaza ...)
Yenye yeelaptops ezinexabiso eliphantsi kolu luhlu, kodwa oko akuthethi ukuba ayinamandla. Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kuya kukubonelela nge ubomi bebhetri ixesha elide ngokwaneleyo, processing fast Kwaye unokudlala imidlalo yevidiyo elula (kweyona inzima kakhulu iyawa mfutshane kodwa ukuba ukhangelela umntwana ilaptop, olu lukhetho olukhulu, ndithembe).
Kumava ethu, eyona nto iphambili kule laptop kukuba ayinayo iDVD drive. Nangona kunjalo, oku kuya kuba sisiqhelo kwiilaptops kolu luhlu lwamaxabiso, ke sukukuvumela oku ukuba kukubeke ecaleni, njengoko uninzi lwesoftware oza kuyidinga, njengeMicrosoft Office, inokuthengwa njengokukhuphela. , akukho diski. Nangona, ukuba oku kukuphazamisa ngokwenene, unokukhetha ukuthenga i-DVD drive yangaphandle ngaphantsi kwe-30 euros.
Ngaphandle koko, ngenxa yobukhulu besikrini sayo, umgangatho wayo kunye neempawu ezikhankanywe ngasentla, le yilaptop enkulu yohlahlo lwabiwo-mali oluqinileyo.
I-ASUS VivoBook 15,6 intshi HD
I-Asus VivoBook inokwenzeka enye yezona laptops zitshiphu kakhulu ukusetyenziswa yonke imihla kolu luhlu. Ibe ngumthengisi ophambili kwiAmazon, kwaye xa ithelekiswa nezinye iilaptops kuluhlu lwamaxabiso, sinokubona ngokulula ukuba kutheni.
Iimpawu esizishwankathele kuluhlu lwangaphambili ziqhelekile kwilaptop yeendawo zonke, yintoni ke eyenza ukuba ikhetheke? Ewe, uAsus ukhethe ukunika ixabiso elingenakoyiswa lemali kunye nomboniso weHD nge Ikhadi lemizobo edibeneyo Intel HD Graphics 620 kunye ne-v2 ye-Dolby Advanced Audio ukuze ukwazi ukubukela iTV okanye imuvi enawo wonke umgangatho obuwulindele.
Olu luhlobo lwelaptop ungasebenzisa zombini umsebenzi kunye nemultimedia. Nangona ingeyiyo incinci kwaye ingeyiyo eyona iphathwayo, kuselula kakhulu ukuyisusa kwindlu uye ngaphandle nangaphandle ukuya ekhaya, sebenza kuyo Windows 10, bukela iimuvi kunye nomabonwakude okanye udlale imidlalo yevidiyo elula. Kuba kubiza ntoni na, ndiyaqinisekisa ukuba kunjalo enye yeelaptops ezilungileyo kolu luhlu lwamaxabiso kwimarike.
Le laptop inexabiso eliphantsi kunezinye ezicetyiswayo, kodwa sigqibe kwelokuba siyibandakanye kuba kwezinye izikhokelo zelaptop yebhajethi iye yafikelela kwindawo ephezulu, yade yabekwa kwindawo yokuqala kuluhlu lwePC Umcebisi wezona laptops zifikelelekayo zika-2021. Ke, ngaba kufanelekile ukuhlawula loo mali eyongezelelweyo okanye ngaba kufanelekile ngale modeli?
Sifake iHP 14 kuluhlu lwethu lwezona laptops zilungele uhlahlo lwabiwo-mali zika-2021 kuba inokuthatha nantoni na oyiphosa kuyo (ngaphandle kwezitena) kunye nokunye okuncinci.
Ibhabha ngokukhawuleza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza ezisisiseko ezinje ngeOfisi kaMicrosoft, ukukhangela iwebhu ngokubanzi, ukusasaza iinkonzo zevidiyo kwaye ikuvumela ukuba udlale imidlalo yevidiyo (nangona kungafuneki silibale ukuba ibingenzelwanga oko, iyacotha kwaye Imizobo yeyomgangatho ophakathi-phantsi).
Kuyo yonke le nto, siyayiqwalasela enye yeelaptops ezilungileyo kuluhlu lwamaxabiso, kuba ungayifumana ngaphantsi kwe-300 euros.
I-Lenovo Ideapad 530
Ubukho beLenovo Ideapad kolu luhlu yinto engaqhelekanga. Le ncwadana ine a Isikrini se-LED esijikelezayo, iHD epheleleyo (1920 x 1080). Oku kuthetha ukuba unokuyibeka kwindlela yokujonga ukuba ufuna ukubukela iividiyo zikaYouTube kakuhle okanye nayiphi na imuvi.
Ngaba yiyo ineyona prosesa ingcono kuluhlu, ngoko lukhetho olukhulu ukuba ujonge ukusebenza kakuhle kwaye ukonwabele i-laptop ye-2-in-1 eguqukayo.
I-Lenovo Yoga 530-14IKB -...
ILenovo Yoga ikhaphukhaphu kancinci kunezinye iilaptops, kodwa ayikakwazi ukungqamanisa neChromebooks esizijonga ngezantsi kulo mba. Inamandla ngakumbi kuneelaptops esizichazileyo kwimihlathi edlulileyo kwaye, nangona isikrini sokusonga sinokubonakala singeyonyani, kuthiwa sisebenza kakuhle kakhulu ngenxa yokuba. yiba nobuchule. Ngokuqhelekileyo le modeli inokusebenziseka okufanayo njengePackard Bell EasyNote, kodwa ineempawu ezithile eziphezulu.
Ezona laptops zingabizi kakhulu ngokusetyenziswa kwazo
I-15,6 "isikrini se-HD 1366x768 pixels
Iprosesa ye-AMD A6-9225, iDualCore 2.6GHz ukuya kuthi ga kwi-3GHz, 1MB
ISIZUKU SESIXHENXE INTEL CORE.I5 DUAL-CORE PROCESSOR
INTEL IRIS PLUS GRAPHICS640 IMIZOBO
I-Ultralight, inobunzima be-1340 g kuphela kunye nobomi bayo bebhetri ukuya kuthi ga kwiiyure ze-19.5, i-LG gram yeyona nto idumileyo "ilaptop ye-17 ...
Windows 10 uHlelo lwasekhaya (i-64bit RS3) ukuze usebenze ngokulula
Imemori eyandisiweyo, i-512 GB SSD njengomgangatho kunye ne-slot eyongezelelweyo yokwandisa ukuya kwi-2 TB; I-8 GB yememori ye-RAM kunye ...
12.3-intshi touch screen (2736x1824 pixels)
Inkqubo ye-Intel Core i5-1035G4, 1.1GHz
I-8GB ye-LPDDR4X RAM
I-Lenovo Yoga 530-14ARR -...
Iscreen se-14, i-FullHD 1920x1080 iipikseli ze-IPS
Iprosesa ye-AMD Ryzen 5 2500U, Quadcore 2.5GHz ukuya kuthi ga kwi-3.4GHz
I-8GB DDR4 RAM, i-2400Mhz
Iingcebiso phambi kokuthenga
Emva kwesikhokelo ngokubanzi kwiilaptops zamaxabiso angcono, unokuba nomdla kwinto ethe ngqo. Kule meko akufanele ukhathazeke, sinothelekiso oluninzi oluya kuba nomdla kuwe.
Ixabiso eliphezulu lomgangatho welaptop. Uthelekiso olugqibayo ngakumbi xa kuthelekiswa ngokucokisekileyo ngakumbi umgangatho kunye nexabiso lezinye iimodeli. Ukuqwalasela ukuba ufuna ukufumana okuninzi kwimali yakho.
Iilaptops zemidlalo. Kulabo basebenzisi bafuna ukuthenga ilaptop ukuze badlale imidlalo. Sibeke kwindawo yabadlali abaphezulu kuzo zombini ii-specs kunye nexabiso ukuze ufumane okuninzi kwimizobo kunye nokusebenza.
Iibrendi zelaptop ezilungileyo kakhulu. Uya kubona ukuba zonke iimpawu ezibandakanyiweyo apha ziyaziwa kwaye ke ayingo matshayina. Uyakwazi ukubona uthelekiso olupheleleyo xa ufuna ulwazi olungcono kulo mba. Sinikezela ngombono opheleleyo apho ziimpawu onokuthi uzithembe. Ziyafana ukuba sithelekisa kwiphepha lethu iilaptops ezingabizi kakhulu.
Ngokufika okukhulu kwe Windows 10, iilaptops zisenyuka kwakhona. Kodwa oku akusona sizathu sodwa sale mpumelelo, baye baphembelela ukuthandwa kwe-Ultrabooks kunye nokwanda kwee-hybrids ezimbini ezisebenza njenge-laptop kunye nethebhulethi. Iilaptops ezinexabiso eliphantsi zifumana umhlaba ngaphezulu kweChromebooks enkosi kwiimodeli ezifana neHP Pavilion x2. Ngeli xesha, iilaptops ezinamandla aneleyo okudlala imidlalo zikwabona ifuthe lazo likhula kwaye kubonakala ngathi ziya kuba lula ukubuyisela iikhompyuter zethu.
Ngokhetho oluninzi olukhoyo, ukukhetha eyona laptop ilungileyo kwiimfuno zakho kuya kuba nzimaYiyo loo nto kubalulekile ukuba, okokuqala, ugqibe ukuba uza kwenza ntoni ngayo.
Ukuba ufuna ukukhetha ngokukhawuleza nangokulula ilaptop ehambelana neemfuno zakho, sicebisa ukuba jonga kweli phepha lewebhu.
Abo basebenzisi bahamba emva kwexesha elikhawulezayo lokuqalisa kunye nekhompyuter enobunzima obulula kuba bafuna ukuhamba nayo baqinisekile ukuba bayonwaba nge-Ultrabook.. Abadlali, kwelinye icala, baya kukhetha iilaptops ezilungelelaniswe kwiigraphics ezifunwayo kunye neemfuno zokusetyenzwa, kwaye abo bafuna isixhobo esibonelela ngokuguquguquka, baya kukhetha i-hybrid-in-one.
Ekuqaleni, kunokubonakala kunzima - ngazo zonke ezo zikhetho - kodwa injongo yethu kukunceda ufumane eyona laptop ilungileyo nokuba iimfuno zakho. Sikholelwe xa sikuxelela ukuba kukho ilaptop efanelekileyo kuwe. Ngesi sikhokelo, awuyi kuyifumana kuphela, kodwa uya kuqiniseka nge-100% yokuthenga kwakho.
Uthelekiso lweeLaptops: Isiphumo sokugqibela
Uvavanyo esalwenzayo lwasikhokelela ekubeni sikhethe abaphumeleleyo abathathu phakathi kweelaptop ezili-10 ezihlalutyiweyoEzi ziimodeli ezintathu esizibandakanya kolu thelekiso lwelaptop.
El yahlelwa kuqala, ophumelele iMbasa yeGolide, nguye HP Umona x360 de 13,3 intshi. Le laptop inamandla Intel Core i7 iprosesa kunye 256GB of SSD - yandiswa ukuya 512 GB -. Ukongeza, isebenza kunye Windows 10, inokuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-9 kunye nemizuzu engama-28 kwaye inobunzima obuyi-1,3 kg kuphela.
HP Umona x360 13-ar0000ns ...
Kuyinyani ukuba ubukhulu be-intshi ye-13,3 ayinaso isikrini esikhulu kwimarike, kodwa iyayenza ngokuphatheka kwayo. I-HP Specter x360 inamazibuko amathathu e-USB 3.0 akunika ukufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke iiperipherals ze-USB. Le laptop iyahambelana SD kunye HDMI amakhadi. Umenzi unikezela ngefowuni ye-intanethi, incoko kunye nenkonzo yezobugcisa, kunye nemidiya yoluntu.
El Okwesibini kuhlelwe kwaye ophumelele iMbasa yeSilivere luthotho UDell Inspiron 5570 de 15 intshi. Isantya iprosesa yale notebook ilungile, 3,1Ghz, njenge processor yayo esisiseko, Intel Core i3, ikunika impendulo ngokukhawuleza. Yintoni enomtsalane kakhulu ngale laptop kukuba ungaphucula ikhadi lemizobo kwikhadi levidiyo le-AMD ukuba ufuna ukusebenza ngemizobo ephezulu. I-1.000 ye-GB yogcino kwi-hard drive yanele kwaye ikunika indawo eninzi yeefayile zakho zemultimedia.
Inkqubo yokusebenza, Windows 10, isebenza kakuhle. Inebhetri ehlala ixesha elide efikelela kwiiyure ze-5 kunye nemizuzu ye-45, inyaniso kukuba le nkalo inokuphuculwa. I-Inspiron 5570 inzima kancinci kunokuphumelela kwethu, i-2.2 kg, oku, ngokuyinxenye, kungenxa yesikrini sayo se-intshi eyi-15. Njenge-HP Envy X360, xa sibeka i-Inspiron kuvavanyo lobushushu, umzantsi wayo ufikelele kwi-37.7 degrees, njengoko sele sixoxile, ayikhululeki ukuba uyibambe ethangeni lakho. Isisombululo esisisiseko sesikrini yi-1920 x 1080 pixels, kodwa ungasiphucula kwisisombululo esiphezulu kakhulu, 3840 x 2160 - okanye yintoni efanayo, a Umboniso we4K. Inamazibuko amabini e-USB 3.0 kunye ne-USB enye 2.0 port.
Gqi beleni, i indawo yesithathu kwaye ophumelele iMbasa yeBronze yi Acer Swift 5 de 14 intshi. Le modeli inesantya seprosesa ye-3,4GHz, inkulu kakhulu kwilaptop kolu didi. Ngokulinganisa kwayo yonke i-A-, idatha yethu yokusebenza ibonisa ukuba iprosesa ayisiyiyo egcina le PC kwindawo yesithathu. Imodeli esisiseko ine-256GB SSD kunye nenkqubo yayo yokusebenza Windows 10.
Ubomi bebhetri obuqhelekileyo buziiyure ezisi-7 kunye nemizuzu engama-36, engaphantsi komndilili weelaptops esizijongileyo. Isisombululo esisisiseko sesikrini yi-1920 x 1080 pixels, kodwa inokuphuculwa ukuya kwi-2560 x 1440. Ukongezelela, i-Acer Aspire Swift ineechwephesha ezimbini ze-USB 3.0 kunye ne-USB 2.0 port.
Ukuthelekiswa kweyona modeli ibalaseleyo, ngoko ke iimodeli ixabiso malunga € 1.000. Ukuba unohlahlo lwabiwo-mali olungqongqo, jonga uthelekiso lwethu lwe laptops umgangatho-xabiso okanye yethu reviews laptop cheap ukufumana eyona iphantsi.
Ukugqiba ngothelekiso lwethu lwelaptop, siza kuchaza ukuba zeziphi iintlobo ezahlukeneyo zeelaptops xa ufuna ukwandisa icandelo ngalinye kancinci kuba sinamanqaku ahambelanayo.
Njengayo nayiphi na enye into ethengiweyo enkulu, xa ucinga ngokufumana ilaptop de kubalwe i-euro yokugqibela. Sisixhobo esiya kuhlala iminyaka embalwa, ke ngoko sicebisa ukuba ujonge isikhokelo sethu kwiilaptops ezilungileyo phambi kokuba wenze naziphi na izigqibo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo kwakukho iilaptops kuphela zokuxhoma kunye neelaptops ukusebenza. Namhlanje, endaweni yoko, iinketho ezininzi kudidi ngalunye. Masiqale ngezinto ezisisiseko:
Ezi laptops ngokwesiseko izixhobo ekufuneka zihlangabezane neempawu ezithile zokuncipha, ukukhanya, amandla kunye nobukhulu isetwe yi-Intel iprosesa, kumzamo wokunceda abenzi beelaptop abathembekileyo beWindows abakhuphisana ne-Apple ye-13-intshi yeMacBook Air.
Ukuze i-laptop ye-Ultrabook ithengiswe ngolo hlobo, kufuneka ihlangabezane neenkcukacha eziqinileyo ezibekwe yi-Intel. Kufuneka ibe mncinci, ayikwazi ukuba nkulu (xa ivaliwe) kune-20 mm ye-13.3-intshi yesikrini okanye i-23 mm ye-14-intshi okanye izikrini ezinkulu. Ukongeza, kufuneka ibe nobomi bebhetri kwiiyure ezintandathu ukuba udlala ividiyo enenkcazo ephezulu okanye ezisithoba ukuba ayisebenzi.
Jonga kwi ultrabooks uthelekiso cheap into esinayo.
Akunakuthatha ngaphezu kwemizuzwana emithathu ukuba i-Ultrabook iphume kwi-hibernation. Ezi laptops ngokubanzi zineemo eziqinileyo zokuqhuba kunye neempawu ezifana nemiyalelo yelizwi kunye nezikrini zokuchukumisa. Ii-Ultrabooks ziyilwe ngokuphatheka kunye nokusebenza engqondweni, kodwa zixabisa phezulu, ziqala kwi-900 yeedola.
Umphumo ube ngomnye Iilaptops ezikumgangatho ophezulu ezingenanto yokumonela ezona laptops zibalaseleyo zeApple. Ii-Ultrabooks ziilaptops ezijikeleze i-2 yeesentimitha ubukhulu, zinobomi obude bebhetri kunye nomboniso obukhali, njengeDell XPS 13 okanye i-Asus Zenbook.
I-Lenovo Yoga 920-13IKB -...
ILenovo Yoga (2021) ayisiyiyo nje ilaptop ebhityileyo kwaye ilula, kodwa iguqukile ngokupheleleyo kwinqanaba loyilo. Ukunyusa isikrini se-13,9-intshi kwisakhelo se-intshi eyi-11 akuyona into encinci, kodwa uLenovo wenze ummangaliso wokwenza imonitha ngaphandle komphetho ongapheliyo. IYoga 910 ikwayilaptop enamandla kakhulu, ehexayo enexabiso elifikelelekayo elicetyiswayo. Kuko konke oku sikujonga njengeyona Ultrabook igqwesileyo.
Ilaptop yokudlala yile nto kanye ucinga ngayo-iPC yabalandeli bokwenyani bomdlalo wevidiyo. Ngamafutshane, azisetyenziselwa ukudlala i-Candy Crush okanye i-Angry Birds, kodwa ukudlala imidlalo ye-PC enzima ngokwenene efuna iprosesa ephezulu, i-8GB ukuya kwi-16GB ye-RAM, ubuncinane be-TB ye-1 yokugcina kunye nekhadi lemizobo. eyona nto ibalulekileyo. Iilaptop zemidlalo zihlala zizikwere kwaye ukwakhiwa kwazo komelele ngakumbi kunezinye iilaptops, kwaye isikrini sabo sihlala sisisombululo esiphezulu.
Uyabona wethu uhlalutyo lwezona laptops zemidlalo zibalaseleyo.
Iilaptop zemidlalo akuyomfuneko ukuba babhitye okanye babe khaphukhaphu, kuba ngokwesiqhelo abadlali bazisebenzisa endaweni yekhompyuter yedesktop. Ilaptop yokudlala ikuvumela ukuba udlale imidlalo efanayo nekhompyuter yedesktop, kodwa ngenzuzo yokuba iphathwa ngokwaneleyo ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye okanye ukudlala kwindlu yomhlobo.
Kutshanje, iilaptops zokudlala zenze inkqubela phambili engakholelekiyo ezama ukubambana noogxa babo bedesktop. Ngale ndlela, kubonakala ngathi esona sigqibo sisengqiqweni kolu tshintsho kukuqala ukubandakanya amaqhekeza edesktop kwiilaptops zokudlala. Lo mzekelo a I-laptop enamandla kakhulu eyi-15,6-intshi, eneprosesa yedesktop enobungakanani obugcweleyo kunye ne-GPU ephezulu yomgca ekhoyo. Unokucinga ukuba le ndibaniselwano inokwenza ilaptop enkulu, kodwa le iyakwazi ukuyipakisha yonke ibe ngumzimba omncinci.
Iilaptop zaBafundi kunye noMsebenzi
Iilaptops zeshishini ziyafana neelaptops zeenjongo eziqhelekileyo ezixoxwe kwamanye amanqaku, kodwa zinjalo eyakhelwe kumgangatho ophezulu, amacandelo awo ahlala ixesha elide kwaye athengiswa ngokubanzi ngeewaranti ezinde nezibanzi.. Akufanelanga utshintshe ilaptop yakho kwishishini rhoqo emva kweminyaka embalwa kuba iphelelwe lixesha.
Ngesi sihlandlo sicebisa ukuba Isikhokelo sencwadi yabafundi.
Ezi ntlobo zeelaptops ziyilwe ngokusebenza kwazo engqondweni, zineprosesa ezine-quad-core ezinokusingatha ngokulula imisebenzi emininzi entsonkothileyo ngaxeshanye kuba kufuneka ukwazi ukuqhuba yonke isoftware eyimfuneko ukwenza umsebenzi wakho, ngaphandle kokucotha kwekhompyuter. Ezi laptops ngokubanzi azinamakhadi emizobo amakhulu, kodwa anokongezwa ukuba umsebenzi wakho ubandakanya imizobo okanye ukuhlelwa kwevidiyo.
I-HP Pavilion 14-ce2014ns inokuthi ngeendlela ezininzi ifane neMacBook Air, kodwa ngumatshini ongcono ngeendlela ezininzi. Incinci, ikhaphukhaphu, kwaye ngendlela enomtsalane ngakumbi enkosi kumzimba wayo we-aluminiyam. Ukongeza, le laptop ineefayile Isisombululo esiphezulu Isiboniso seHD epheleleyo, i-Intel Core i7 CPU kunye ne-1TB yokugcina i-HDD njengokhetho. Nangona kunjalo, eyona nto imangalisayo kukuba ungayifumana yonke le nto malunga ne-800 yee-euro, eyenza ibe yenye yeelaptops ezilungileyo ukuba unohlahlo lwabiwo-mali lwabafundi.
Yenzelwe phantse umsebenzi kuphela, kungoko igama labo, ezi ncwadana zamanqaku zishinyeneyo zinento enye kuphela engqondweni: imveliso. Abathengisi ngokubanzi baxhobisa ezi yunithi ngee-GPU zebakala lobuchwephesha, ezinje ngothotho lweNvidia Quadro okanye umgca we-AMD FirePro.
Ezinye iimpawu zayo zezi a iintlobo ngeentlobo ebanzi amazibuko kunye nofikelelo lula kubangaphakathi kunezinye laptops zokuzonwabisa. Singasathethi ke ngamagalelo elifa, njenge-TrackPoint cursors, kunye ne-hardware-level yokhetho lokhuseleko, njengezikena zeminwe. Njengemizekelo sinokuyikhankanya iLenovo ThinkPad X1 Carbon kunye neHP ZBook 14.
I-Lenovo Ideapad 330, ngenxa yobuhle bayo obuphantsi kunye nokuqina, uyilo olunzima, Intle kakhulu yonke into oyifunayo kwindawo yokusebenza ephathwayo. Ukongeza, inika iingcali isisombululo esihle sesikrini, ubomi bebhetri obude, kunye nokusebenza okuqinileyo, okuthembekileyo.
Ukuthathela ingqalelo ukuba kubiza ukusuka kwi-900 yee-euro, kufanelekile ukuhlawula olongezelelweyo kuyo yonke into enikezelayo kwiingcali ezisebenza ngaphandle kweofisi.
Iilaptops ezimbini-kwinye (imixube)
Ukuba ungomnye wabo badibanisa ukusetyenziswa kwelaptop kunye naleyo yethebhulethi, kusenokwenzeka ukuba isixhobo esixutyiweyo sesona sifanelekileyo kuwe. Inikwe amandla ngenkqubo yokusebenza esetyenziswa kabini, iMicrosoft Windows 8Ezi zixhobo zinokuba ngohlobo lwamacwecwe apho izincedisi zinokudityaniswa ukuze zisebenze njengeelaptops, okanye zinokuba ngohlobo lwelaptop ethatha imo yethebhulethi xa ikhutshiwe kwikhibhodi. Ungabona nanku uthelekiso lwethu I-2-in-1 iincwadana eziguqulwayo ukuba unomdla kule mizekelo.
Kanjalo, Umbono kukubonelela ngesixhobo esinokusebenza ngempumelelo zombini njengethebhulethi kunye nelaptop, ukuze kungabikho izixhobo ezininzi ezijikeleze indlu. Ukwazisa ezi zixhobo kwimarike akukhange kube lula, kodwa owona mzekelo uqaqambileyo wesakhono sazo yiMicrosoft's Surface Pro 3.
I-HP Specter x360 13 ayisosona sixhobo simangalisayo kwaye siguquguquka kuphela ukusuka kwi-brand ye-HP ukuza kuthi ga ngoku. eyona laptop inyanzelekileyo ye-hybrid kwimarike. Emva kweminyaka yokucokiswa, le tablet entsha ye-hybrid evela kwi-HP iye yaphuculwa kakhulu, njengescreen esikhulu okanye isisombululo esiphezulu. Ukongeza, ezinye izinto ezincinci zenziwe ngokutsha, njengehinge okanye uhlobo lwesigqubuthelo, ukwenza iHP Specter izinze ngakumbi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Uya kuqaphela ilaptop yokudlala nje wakuba uyibona: ubungakanani obukhulu, izibane ezidanyazayo, imizobo yemoto, kunye neefeni ezijikelezayo. Nangona Ndiyabulela kwinkangeleko yeemodeli ezincinci, ezikhaphukhaphu kunye nezintle ngakumbi, njengeRazer Blade okanye iMSI GS60 Ghost Pro, le paradigm iqala ukutshintsha..
Ukucinezela kwesi sixhobo Unothelekiso olupheleleyo kwiilaptop onokuzidlala (umdlalo).
Ngokubanzi, iilaptops zokudlala zinjalo ixhotyiswe ngee-GPU zeselula zamva nje ezivela kwi-Nvidia kunye ne-AMD ukukwazi ukudlala imidlalo yamva nje kunye nokuba udlale ngekhompyuter yedesktop (Kukho imifuziselo enokubuyisela ngokuthe ngqo ikhompyuter yedesktop).
IiLaptops zeNjongo ngokubanzi
Olu hlobo lokugqibela lwelaptop kunzima ukuluhluza. Zingoomatshini abasalandela imigangatho ebekiweyo kumashumi eminyaka eyadlulayo kwinto ebekufanele ukuba yilaptop, nangona icocwe ngakumbi. Ukuthathela ingqalelo yonke into enikezelwe yimarike yelaptop, ngokwesiqhelo ezo ezikolu luhlu zithathwa njengeekhompyuter ezitshiphu okanye eziphakathi.
Ezi laptops ziqala ngobungakanani bescreen ukusuka kwi-11 ukuya kwi-intshi ezili-17 kwaye ngokubanzi azinazinto zininzi zincamisayo phantsi kweengxowa zazo zeplastiki eziqhelekileyo. Ziikhompyutha ukwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla kodwa ziyasilela xa uneemfuno ezinzima kakhulu. Ndiyayikholelwa lo nto le infographic Kuya kukunceda kancinci ukuba ubone yonke into ngomzobo ngakumbi.
Ngo-2014 i-13-intshi yeMacBook Pro ngokuqinisekileyo yayiyeyona laptop ibalaseleyo yakha yakhutshwa nguApple. Imodeli ka-2021 ngandlela ithile ikhawuleza ngakumbi kwaye inika ubomi obude bebhetri. Ngaphandle kohlaziyo lwangaphakathi, i-2021 13-intshi yeMacBook Pro izuze i-trackpad esanda kwaziswa yeForce Touch. Mhlawumbi i-Apple ayiphumeli kwizicelo zayo zeshishini, kodwa ukufumana iMac kunomtsalane kakhulu ukuba uthathela ingqalelo isoftware eyinikezelayo kunye nohlaziyo lwayo.
I-Chromebooks yenye yezona zincinci kwaye zikhaphukhaphu iilaptops kwimarikeKodwa abanawo amandla kunye nomthamo wokugcina iincwadana zemveli. Endaweni yenkqubo yokusebenza yeWindows okanye yeMacintosh, iiChromebooks zisebenza kwiGoogle Chrome OS, eyenzelwe ngokukodwa ukukhangela i-intanethi kunye nokunye okuncinci. Ngokwesiqhelo, i-hard drive yabo incinci kakhulu - malunga ne-16GB - isikrini siqhelekile kwii-intshi ezili-11, kwaye bahlala benezibuko elinye le-USB.
Sinohlalutyo olupheleleyo lothelekiso lwe IiChromebooks njengezona laptops zincinci zibalaseleyo.
Nangona kunjalo, zikuvumela ukuba ugcine iifoto, iividiyo kunye namanye amaxwebhu kwiGoogle Drive endaweni yehard drive yakho.. Isisombululo sescreen sayo siqhelekile ukuba yi-1366 x 768 pixels, eyanele ukusefa i-Intanethi kwaye ubukele imuvi ngamaxesha athile. Kwakhona, ungasoloko uqhagamshela iseti ye-USBs ukwandisa uqhagamshelwano.
Isiphumo yinkqubo enokuthi iqhube kwi-hardware ephantsi, eyenza i-Chromebooks ilungele uhlahlo lwabiwo-mali oluqinileyo okanye kubafundi. Ewe kunjalo, ii-Chromebooks zisebenza kakuhle kwiindawo apho kukho ukufikelela kwi-intanethi ngaphandle kwamacingo, kodwa uGoogle uye wanyusa kakhulu ukusebenza kwayo ngaphandle kweintanethi mva nje. Ukufumana umbono wokuba banjani, unokujonga kwiDell Chromebook 11 okanye iToshiba Chromebook.
I-Netbooks ziyafana ne-Chromebooks kuba zincinci kakhulu, azibizi, kwaye zilungiselelwe ukukhangela iwebhu kunye nokunye okuncinci. Ezi khompyutha zamanqaku azinayo i-optical drive yokudlala iiDVD kunye neeCD. Nangona kunjalo, Ngokungafaniyo ne-Chromebooks, ii-netbooks zihlala zisebenza kwi-Windows operating system, nokuba Okokugqibela okanye ngaphambili, apho uninzi lwabasebenzisi baqheleneyo.
Ungacinezela Apha ukubona ezona netbooks zingabizi kakhulu.
Ngaphaya koko, iincwadi ezininzi ze-netbooks, ezinezikrini eziphathwayo ezinokuthi zifumaneke kunye neekhibhodi, zikumda phakathi kweelaptops kunye neetafile. I-netbook yilaptop enkulu kwabo bathanda ukusebenzisa izicelo zokudlala imidlalo, kodwa bakhetha ukuchwetheza ngekhibhodi ebonakalayo.
Ingcono encinci okanye enkulu?
Nokuba yeyiphi na inqanaba labo, iilaptops Ngokuqhelekileyo ziyi-11-17 intshi ngobukhulu. Isigqibo sakho malunga nobungakanani bobungakanani bokuthenga ilaptop kufuneka sisekelwe kwezi zinto zimbini: ubunzima kunye nobukhulu besikrini.
Okokuqala, ubungakanani besikrini sakho selaptop buthetha ngokuthe ngqo umthamo womxholo onokuwubonisa kunye nobukhulu bawo, ewe. Nangona kunjalo, kufuneka ugcine engqondweni ukuba, Njengoko ubungakanani beskrini busanda, isisombululo kufuneka sinyuke. Akufunekanga wamkele nantoni na engaphantsi kwesisombululo se-1366 x 768 kwi-10 ukuya kwi-13-intshi yeelaptops, okanye i-1920 x 1080 ye-17 ukuya kwi-18-intshi yeelaptops.
Okwesibini, kufuneka ugcine engqondweni ukuba Kwi-intshi nganye yesikrini oyinyusayo, ubunzima belaptop buya kunyuka malunga ne-0.45 kilos. Ngokuqinisekileyo, kukho okungafaniyo, kukho iimodeli ezilula kunye nezincinci ezaphula lo mkhwa. Mhlawumbi ufuna esona sikrini sibukhali kwaye sikhulu kwimarike, kodwa ngaba uzimisele ukusiphatha kubhaka wakho?
Zeziphi izinto omele uzijonge?
Njengakwizixhobo ezininzi zetekhnoloji, iilaptops zihlala ziza nenani leempawu onokuthi uzifune okanye ungazifuni ngokungagqibekanga. Iimpawu ezidweliswe ngezantsi zezona zinto zifunekayo, ezo kufuneka uzijonge xa ​​uthenga ilaptop yakho.
USB 3.0- Lo ngumgangatho wamva nje kwiteknoloji yokudlulisa idatha ye-USB. Qinisekisa ukuba ilaptop yakho inelinye lala mazibuko ukuze ukuhanjiswa kwefayile phakathi kwelaptop yakho kwaye, umzekelo, i-USB 3.0 flash drive ikhawuleze.
I-Wi-Fi ye-802.11ac- Kuze kube ngoku i-802.11n yayiyeyona nto ikhawulezayo i-intanethi ye-intanethi, kodwa kunyaka odlulileyo i-802.11ac routers zivele. Ukuba uceba ukusebenzisa ilaptop yakho ukubukela iividiyo zokusasaza okanye ukukhuphela inani elikhulu leefayile kunye nomxholo, kuya kufuneka ucinge nzulu ngokukhetha imodeli enolo hlobo loqhagamshelo lwe-Wi-Fi.
Umfundi wekhadi le-SD-Ngokuthandwa kwekhamera ye-smartphone yokuthatha izifinyezo, abaninzi abavelisi beelaptop sele beqalile ukulisusa eli nqaku kwiimodeli zabo, nangona kunjalo, ukuba ungumntu othanda ukufota, unokuphoswa ngumfundi wekhadi le-SD.
Cofa isikriniNgelixa iimfanelo zesikrini esichukumisayo kwilaptop zithandabuza okwangoku, asazi ukuba ikamva lizakuzisa ntoni. Nangona kunjalo, luphawu olunokwenza ukuba iseti ibize kakhulu, ke yivavanye kakuhle ukuba iya kuba luncedo na phambi kokuba wenze isigqibo.
Imibuzo omele uzibuze yona phambi kokuthenga
Ngaphambi kokuba ukhawuleze ukuya kuthenga eyona laptop ijongeka kakuhle, kuya kufuneka uzibuze le mibuzo ilandelayo. Baya kukunceda wenze isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwelaptop olulungele wena.
Uza kuyisebenzisela ntoni ilaptop ubukhulu becala?
Ukuba ubukhulu becala uya kuyisebenzisa ukusefa kwi-Intanethi, ukubukela iividiyo ezidlalayo kwaye ufowunele ngevidiyo nosapho ngamaxesha athile, ngokuqinisekileyo uya kuba nokwaneleyo ngekhompyutha ukusetyenziswa ngokubanzi okanye ngokwezoqoqosho. Uyathanda ukudlala? Apho unayo impendulo. Uhamba kakhulu kwaye ufuna ilaptop ebhityileyo nekhanyayo, zama iUltrabook. Ukuphendula lo mbuzo kuya kuhlala kukukhomba kwicala elifanelekileyo.
Ngaba uyikhathalele kangakanani uyilo?
Kukho iilaptops zazo zonke iimilo, iimveliso, iimodeli kunye nobukhulu - ungakhankanyi uluhlu lwepeyinti okanye izinto eziphathekayo. Ukuba uyathanda ukugxeka uyilo olubi lweelaptops ozibonayo ezikujikelezileyo, mhlawumbi ufuna nje ikhompyuter enecala le-aluminium, okanye iplastiki ethambileyo. Kodwa lumka, uyilo ludla ngokubiza imali eninzi.
Yimalini onokuthi uyichithe okanye uzimisele ukuyichitha?
Ekugqibeleni, oku kufanele kube yibarometer yakho ephambili xa usenza isigqibo sokuba yeyiphi ilaptop onokuyithenga, akufuneki uchithe ngaphezulu kunokuba unako. Uhlahlo lwabiwo-mali lwakho luya kumisela ukuba loluphi udidi lwelaptop oyithengayo.
Ngaba ujonge ilaptop enexabiso eliphantsi? Sixelele ukuba ufuna ukusebenzisa malini
Usenokuba awukayiqondi, kodwa ilaptop ibinathi iminyaka engama-30, nangona kwiintsuku zayo zakuqala ibingaphezulu komatshini wokuchwetheza. Kangangamashumi eminyaka, iikhompyuter zedesktop zemveli zibonelela ngamandla ekhompyuter, umthamo omkhulu wokugcina, kunye nabahloli abangcono ngexabiso eliphantsi. Phakathi kwiminyaka yee-XNUMX, kwakuyinto eqhelekileyo ukuba nekhompyutha, kodwa ezinye iintsapho zaqalisa ukubona iingenelo zokuba nelaptop.
Ngokuhamba kwexesha, i-Intanethi iye yavela kwiimodem zokucofa ukuya kwiirotha ezingenazingcingo esinazo ngoku, ngokuhambelanayo, iilaptops ziye zaphucuka ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi ababefuna ukuhamba ngeekhompyuter zabo. Nje ukuba igajethi yoosomashishini, iibhanki kunye nomkhosi, namhlanje ibe sisixhobo esibalulekileyo kuye wonke umntu.
Njengoko ukuphatheka kwelona xabiso liphambili lelaptop, xa uvavanya ukuba yeyiphi ikhompyuter onokuyithenga, kufuneka ubeke ingqalelo kubungakanani bayo kunye nobunzima bayo., ngaphandle kokulibala iprosesa yayo kunye nomthamo wayo wememori. Nangona iilaptops zale mihla zingasenabunzima obungaphezulu kwe-9 yeekhilos ezifana nezindala, usenokuwuqaphela umahluko phakathi kwemodeli eyi-2.72 kg kunye ne-1.84 enye. Ukuba ungumfundi kwaye uceba ukuyisa ilaptop yakho eklasini, kuya kufuneka uyithwale ngobhaka okanye ebhegini kwaye uya kuyixabisa ngokuqinisekileyo ukuba imodeli encinci, elula. Kodwa, kwelinye icala, ukuba uyinjineli yesandi kwaye urekhoda ikonsathi ephilayo yebhendi yomculo, into oya kuyibuza ikhompyuter yakho kukuba ibe namandla kangangoko.
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeelaptops. Unokuchitha amakhulu ambalwa eeuro kwilaptop esisiseko okanye amawaka aliqela kwilaptop yokudlala ephezulu. Kwabanye unokusefa kuphela kwi-Intanethi kwaye ubhale ii-imeyile, ngelixa abanye bekwazi ukuqhuba ividiyo kunye neenkqubo zokuhlela iifoto ngaphandle kwengxaki. Uhlobo lwelaptop oyikhethayo kufuneka luhambelane nemisebenzi oceba ukuyenza ngayo. Ngaba uyayidinga ukuze isebenze? Ngaba uyafuna ukubukela iimuvi okanye iinkqubo zeTV ozithandayo kuyo? Ngaba ungumntu onobuchule okanye uyayithanda imidlalo yevidiyo? Kolu thelekiso lwelaptop sivavanye ezona modeli zibalaseleyo kwimarike. Ukuba ufuna ukungena nzulu, unokufunda amanqaku ethu kwiilaptops.
Yeyiphi eyona laptop ilungileyo kulo mzekelo?
Impendulo yalo mbuzo ayilula kwaye ayinanto yakwenza neelaptops esizibeke etafileni yethu. Eyona laptop ilungileyo yile ihlangabezana neemfuno ozijongayo kwaye akunyanzelekanga ukuba idibane nezo zomnye umntu.
Ngelixa unokuba ujonge eyona laptop ikhaphukhaphu kwimarike yokuhamba nayo yonke indawo, omnye umsebenzisi unokukhangela okwahlukileyo.
Ngenxa yesi sizathu, kuthelekiso lwethu lwelaptop siye sazama ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abaphulaphuli, ukubheja kweyona modeli ilungileyo kwicandelo ngalinye ngokumalunga nexabiso layo lomgangatho.
Ukuba awuyazi ukuba yeyiphi ikhompyuter onokuthi uyithenge, sishiyele uluvo kwaye siya kukunceda ukhethe eyona ifanele iimfuno zakho.
Ilaptop efanelekileyo kuwe iya kuxhomekeka ngokupheleleyo kwiimfuno zakho, yento oza kuyisebenzisela yona. Kungenxa yesi sizathu ukuba uluhlu luyalelwa ngexabiso kwaye kungekhona "ngomgangatho".
Ukuba ujonge ilaptop oza kuyisebenzisa ngamaxesha athile (njengokukhangela i-imeyile yakho, ukusefa iwebhu, ukuhlaziya iinethiwekhi zakho zentlalo, uhlele iifoto, ubukele iNetflix okanye wenze omnye umsebenzi wakho ngeMicrosoft Office okanye iGoogle Docs, ungagxininisi ngeeChromebooks. ), Ndincoma kakhulu ukuba ucinge ngeChromebook. Jonga ezi zingasentla yesi sikhokelo. Ukuba nangaloo nto, unyanzelisa ukuthenga ilaptop yeWindows, okanye ufuna into enamandla ngakumbi, ungakhetha enye yeekhompyuter esizicetyisiweyo ekuqaleni.
Kweli nqaku linye uya kufumana abo banexabiso elingcono lemali. Kananjalo ukuba ujonga iwebhu kancinci usebenzisa imenyu yokukhangela kunye nabanye uya kubona ukuba sinakho uthelekiso kunye namanqaku athile ngakumbi kuxhomekeke kuhlobo lwelaptop ofuna ukuyithenga. Unokufuna ukubona ezona laptops zemidlalo zibalaseleyo (zomdlalo), okanye eyona laptop ilungileyo yomsebenzi, njl.
Njengoko ubona kuluhlu, ndiya kucaca ngokupheleleyo nawe. Zonke iilaptops oza kuzifumana ngezantsi ziikhompyuter zeWindows. Kwaye, ukulunga, ndongeze iimodeli zeWindows endizithiyileyo kancinci. Akunjalo ukuba ii-laptops zeWindows zimbi, kodwa ukuba ndihlala ndisebenzisa i-Chromebook enokusetyenziselwa imisebenzi efanayo kwaye, ngokubanzi, iyabiza (njengoko ubonile). Ihamba ngaphandle kokutsho ukuba i-Apple Macbooks ayinayo indawo kwesi sikhokelo 🙂
1 Iilaptops ezilungileyo kakhulu
1.1 Iintengiso zanamhlanje kwiiLaptops ezitshiphu
1.2.1 Iilaptops ngokwexabiso
1.2.2 Iilaptops ngeprosesa
1.2.3 Iilaptops ngokohlobo
1.2.4 Iilaptops ngokohlobo
1.2.5 Iilaptops ngokwescreen
1.2.6 Iilaptops ngokosetyenziso ofuna ukukunika lona
1.3 Ezona laptops zingabizi kakhulu zika-2021
1.3.1 ICHUWI HeroBook
1.3.2 ILenovo S145
1.3.3 ASUS VivoBook 15,6-intshi HD
1.3.5 I-Lenovo Ideapad 530
1.4 Ezona laptops zingabizi kakhulu ngokusetyenziswa kwazo
1.5 Iingcebiso phambi kokuthenga
1.6 Uthelekiso lweeLaptops: Isiphumo sokugqibela
1.7 Iintlobo zeeLaptops
1.7.2 Iilaptop zemidlalo
1.7.3 Iilaptop zaBafundi kunye noMsebenzi
1.7.4 Izikhululo zokusebenza
1.7.5 Iilaptops ezimbini-kwinye (imixube)
1.7.6 Iilaptops zemidlalo
1.7.7 IiLaptops zeNjongo ngokubanzi
1.7.9 Iincwadi zeNetbook
1.8 Ingcono encinci okanye enkulu?
1.9 Zeziphi izinto omele uzijonge?
1.10 Imibuzo omele uzibuze yona phambi kokuthenga
1.10.1 Uza kuyisebenzisela ntoni ilaptop ubukhulu becala?
1.10.2 Ngaba uyikhathalele kangakanani uyilo?
1.10.3 Yimalini onokuthi uyichithe okanye uzimisele ukuyichitha?
1.11 Yintoni esiyixabisileyo?
1.12 Yeyiphi eyona laptop ilungileyo kulo mzekelo?
1.13 Isiphelo sokugqibela
Iilaptops zangoLwesihlanu omnyama
Iilaptops zeCyber ​​ngoMvulo
Iilaptops ezitshiphu 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies - Contacto